Macalin soomaaliyeed oo leeliya xul qaran oo kamid ah kuwa waqooyiga Ameeriga » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Africa/Macalin soomaaliyeed oo leeliya xul qaran oo kamid ah kuwa waqooyiga Ameeriga
Inta badan dalalka caalamka waxaa ku nool soomaali fara badan oo wax baratay kuwaasi oo ka cararay dagaaladii dalka ka dhacay waxaana ku jira bahda Sportska qaybahooda kale duwan oo shaqooyin ka haya hay’ado iyo xulal caaalmi ah.
Hadaba waxaa jira macalin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ahmed Mohamed Ahmed oo loo yaqaano (Ahmed Gaab)Waana macalinka xulka qaranka Barbados oo ah wadan dhaca waqooyiga Ameerika isaga oo meel hoose kasoo qaaday waxaana uu kala qayb galay tartamo iyo kulamo kale isaga oo haysta khibrada sare ama shahaada EUFA iyo FIFA ee dhanka tababarka.
Macalin Axmed oo ku dhashay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho February 22, 1980 ayaa waxaa uu soo bilaabay shaqada tababarnimo 1997 isaga oo soo qabtay dhowr kooxood oo yurub ah sida Sweden iyo Swirzerland oo uu dagnaaa waxaana uu sidoo kale soo hogaamiyay xulka Jaziirada US Virgin Islands oo ah qayb kamid ah wadanka maraykanka.
Macalin Ahmed Mohamed Ahmed oo loo yaqaano (Ahmed Gaab) oo ah macalinka xulka qaranka Barbados ayaa waxaa uu waraysi dhinacyo badan taabanaya uu siiyay idaacada cayaaraha ee Gool FM isaga oo jooga caasimada Barbados ee Bridgetown waxaana wareestay wariye Abdullah Hassan Baliil.
Wax -walba ka ogow arimaha doonista Man City ee Alex Sanchez